Shil Diyaaradeed oo Ka Dhacay Siberia, Dhamaan 19-kii Diyaaradood Ayaa Ka Badbaaday Shilka | Amniga
Bogga ugu weyn » Badbaadada Safarka & Xaaladaha Degdega ah » Shilka Diyaaradda Rakaabka ayaa ku Burburay Siberia, Dhamaan 19-ka Qof ee Saaran Diyaaradda Ayaa Ka Badbaaday Shilka
Shilka Diyaaradda Rakaabka ayaa ku Burburay Siberia, Dhamaan 19-ka Qof ee Saaran Diyaaradda Ayaa Ka Badbaaday Shilka
Heerarka badbaadada duulimaadyada rayidka ee Ruushka xoogaa wey soo fiicnaadeen sannadihii la soo dhaafay laakiin shilalka, gaar ahaan ku lug lahaanshaha duullimaadyada duugga ah ee gobollada fog fog, ma aha wax aan caadi ahayn.
Diyaaradda Antonov An-28turboprop ayaa ku dhacday diyaaradda Ruushka ee Siberia.
Diyaaradda dhacday waxaa ku sugnaa helikabtarrada gurmadka ee Wasaaradda Gurmadka.
Dhammaan 19-kii qof ee saarnaa diyaaradda dhacday ayaa ka badbaaday degitaan adag.
Diyaarad rakaab ah oo ay sameysay Ruushka oo la yiraahdo Antonov An-28 oo matoor matoor turboprop ah, oo ay maamusho shirkadda Siberia Light Aviation (SiLA), oo ah shirkad yar oo duulimaadyo ka bixisa gobollada Siberia ee Ruushka, ayaa la waayey xilli ay ka duushay magaalada Kedrovoye kuna sii jeeday magaalada Tomsk.
Waxyar ka dib markii laga waayey raadaarrada, diyaaradda burburtay waxaa ku sugnaa helikobtarada gurmadka ee Wasaaradda Gurmadka oo loo diray inay baadi goobto.
Sida laga soo xigtay saraakiisha wasaaradda, dhammaan 19-kii qof ee saarnaa diyaaradda dhacday ayaa ka badbaaday degitaanka adag.
Kabtanka diyaaradda ayaa lug ka jabay, laakiin ma jirin rakaab ama shaqaalihii oo dhaawac culus soo gaaray, waxaana hadda laga daad gureynayaa goobta ay diyaaradda ku dhacday.
Sida laga soo xigtay agaasimaha shirkadda duulimaadka ee Siberian Light Aviation Andrey Bogdanov, wuxuu rumaysan yahay in matoorada diyaaradda dhacday ee An-28 ay fashilmi lahaayeen sababo la xiriira xaaladaha cimilada oo aad u xun.
Burburka maanta ayaa imanaya wax ka yar laba toddobaad kadib markii diyaarad la mid ah, Antonov An-26, ay ku dhacday buur xaalad muuqaal ahaan liidata oo ku taal jasiiradda fog ee Kamchatka ee Bariga Fog ee Ruushka, oo ay ku dhinteen dhammaan 28 qof oo diyaaradda saarnaa.
Diyaarad nooceedu yahay Antonov-28, oo ah nooca diyaaradda ee lagu waayey Tomsk, ayaa ku burburtey keynta Kamchatka sanadkii 2012, waxaana ku dhintey 10 qof. Baarayaasha ayaa sheegay in labada duuliye ay sakhraansanaayeen markii uu shilka dhacayay.